5 Famous Film Places In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Famous Film Places In Eoropa
Fotoana famakiana: 6 minitra(Last Nohavaozina: 10/07/2020)
Eoropa dia mitaona ny artista sy ny mpamokatra sarimihetsika ary avy manerana izao tontolo izao, ka dia tsy mahagaga fa manintona mpamokatra sarimihetsika mitovy! Hahita 5 Famous Film Places in Eoropa ary boky ny fety ary fiaraha-mientana ny Miroboka ao amin'ny toerana tena sarimihetsika ho fety tanteraka amin'i Eoropeanina Best Destinations.
Rail transport is the most environment friendly way to travel. Ity lahatsoratra ity dia nosoratana mba hampianatra momba Train Travel ary Izy no nanaovana Vonjeo A Train saran-dalana mora indrindra Website eto amin'izao tontolo izao.
1. Famous Film Places In Eoropa: Notting Hill, London, UK
Tadidio Hugh manome manga maso ao amin'ny sarimihetsika Notting Hill? Hahita Notting Hill, iray amin'ireo tena London toerana tsara tarehy ary ny an-trano ho any ny tena quintessentially Britanika Rom-serasera. Ny fijerena ny horonan-tsary io tsy afaka ny tsy hahatonga anao hahatsapa tsara kokoa ... Ny ampahany tsara indrindra momba ny Notting Hill dia be izany dia naka sary tao afovoan'i London! Izany dia midika fa afaka mitsidika ny maro ny toerana malaza misy ny hita ao amin'ny sarimihetsika!
Ao amin'ny fanokafana sehatra, Hugh Grants toetra, William Thacker mandeha amin'ny alalan'ny Portobello Road Market. Ity tsena malaza izao tontolo izao dia tsy mendrika ny fitsidihana satria izany no iray amin'ireo malaza indrindra Notting Hill Filming Locations, fa noho ny tsena fotsiny mihitsy no tsara tarehy sy feno quirky Antiques miandry fotsiny ny ho hita.
Manaraka, Manoro hevitra anareo izahay lohan'ny ho Wills Bookshop, 142 Portobello Lalana. Maha-te ho tia kely fivarotam-boky tompony Dia ao ilay horonantsary dia hita eo 142 Portobello Lalana. Tamin'ny fotoana filming, izany dia ny fahagola shop. ankehitriny, ny adiresy an-trano ny kiraro shop. Voalaza fa teo akaiky teo bookshop ny anarana hoe The Travel Bookshop mifototra amin'ny 13-15 Blenheim Close no fitaomam-panahy ho an'ny sarimihetsika fivarotana.
2. Harry Potter, Alnwick Lapa, UK
malaza ity 1,000 taona Moyen Âge lapa dia amin'ny toerana tena du film orinasa, izay no mahatonga antsika tsy afaka miala azy io eny amin'ny 5 Famous Film Places in Europe lisitra. Izany no malaza indrindra toy ny toerana ho an'ny Hogwarts in Harry Potter. Alnwick Lapa dia tsy iray amin'ireo lehibe indrindra ny trano fiarovana tany Angletera sy 1,000 taona, nefa zavatra iray ihany koa ny sarimihetsika kintana amin'ny zo manokana!
Amin'io lapa no iray amin'ny malaza indrindra any Grande-Bretagne, rehefa vita ny endrika ivelany amin'ny sarimihetsika malaza sy fandaharana amin'ny fahitalavitra toy ny Elizabeth, Robin Hood: Mpanjaka ny Mpangalatra, ny Downton Abbey Krismasy manokana, ary ny malaza indrindra anjara asany amin'ny maha-Hogwarts Sekoly ny Famosaviana sy Wizardry roa voalohany Harry Potter sarimihetsika.
Izany dia tao amin'ny trano mimanda antony fa Harry nanana ny voalohany Quidditch lesona (anati-rova Paoly izao Tompon'ny maro, broomstick fanofanana mandritra ny vanin-taona mafana) ary ny toerana izay ny Weasleys manidina Ford Anglia fianjeran'ny latsaka tamin'ny andro voalohany am-pianarana.
Ankoatra ny forays ny lehibe sy ny kely efijery, ny asa lehibe lapa koa lava sy manan-karena tantara. Izany dia natsangana manodidina 1096 ary dia hita ao amin'ny teny anglisy ny fivondronan ' i Northumberland. Ankehitriny dia an-trano ho any amin'ny Duke ny Northumberland sy ny fianakaviany ary ny faharoa lehibe indrindra misy mponina trano mimanda tany Angletera taorian'ny Windsor Castle.
3. Famous Film Places In Eoropa: Hamlet, Dunnottar Lapa, Scotland
Araka ny lapa any, dia sarotra ny sary an-tsaina kokoa lavitra sy toerana miavaka kokoa noho Dunnottar. Angamba ny tena tafiditry ny fahavalo toerana rehetra Scottish lapa, ity iray ity dia mipetraka eo an-tampony ny harambato saikinosy eo amin'ny lalana mankany Aberdeen, niaro eo amin'ny lafiny rehetra amin'ny ny herin'ny natiora. Izany dia mazava ho azy ihany koa ny fanentanana malaza Princess Meridas fianakaviana an-trano any Disney Pixars nitombo avo roa heny mahery-fo ary ho Elsinore in Franco Zeffirellis Hamlet!
Ny toerana laharana maha-iray ny tena mampivarahontsana na aiza na aiza ary ianao mahazo ny fahafahana ho amin'ny andro firavoravoana ny masonao momba ny sasany ny tena manaitra dranomasina in Scotland. Wind voafafa midadasika, iza na iza hantsam-bato, sy ny onja rehetra hokapohin'ny hifanatrehanay amin'ny tantaram-pitiavana iray tena resahana.
Dunnottar ihany koa dia manolotra ny momba ny fiarovana sy ny lapa manana fatra tsara ny angano sy ny zava-miafina. Whigs Vata hahatonga ny volo hitsangana amin'ny farany dia toy ny fiangonana (ankehitriny rava) nandoro amin'ny William Wallace.
Na dia Dunnottar dia mitombo amin'ny lazany, dia tsy iray amin'ireo lapa Scottish busier. Plus, ny habeny dia midika hoe ianao dia afaka mora foana hiala amin'ny vahoaka sy mankafy ny tsy manam-paharoa toerana efa eo ihany. Izany ihany koa ny tonga lafatra mijanona eny amin'ny Angus Coastal Route, tena mahafinaritra Ekaosey-dalana dia.
4. Nitsanganany, Paris, Frantsa
Rehefa mieritreritra ny Paris, Frantsa, tsy tonga dia mihevitra ny ny tour Eiffel. Ary nahoana no tsy nety ianareo? Tena tsara tarehy, ary tena tsara tarehy, fa efa nahita izany rehetra arivo fotoana rehetra ny cartes postales, peta-drindrina, ny entam-barotra sy sary vaovao satria mbola ankizy. Fa misy zavatra tena hampangatsiaka mitsangana fotsiny hanipy vato avy amin'ny Eiffel: ny Niandohan'ny tetezana.
Pont de Bir Hakeim dia tetezana iray miampita ny Seine Renirano any Paris. Naorina ny zato taona lasa izay, ary tsy nivadika manompo tahaka ny ony niampita Tondroy ny mponina, fa amin'ny 2010 nanjary marina sarimihetsika star. Fa rehefa Christopher Maria tonga ny crew, anisan'izany ny Leonardo DiCaprio, I Ellen Pejy, ary Joseph Gordon Levitt.
In 2010 ny zava-mahagaga nitranga ity tetezana. Ao amin'ny fanokafana sehatra, Ellen Pejy toetra Ariadne Mianatra mba hanorina nofy.
5. Famous Film Places In Eoropa: La Vita e bella, Arezzo, Italia
Ity sarimihetsika mbola mitondra ny ranomaso ny maso rehefa mieritreritra aza aho fa ny momba azy. Aho nahita ity sarimihetsika malaza any am-pianarana, taona maro lasa izay, ary izany dia tsy namela ny fahatsiarovana. Izany no antony manokana dia nandeha aho mahita ity sarimihetsika malaza toerana ny tenako! Roberto Benigni 1997 Oscar mba handresena ao La Vita y Bella (Mahafinaritra ny fiainana) dia sangan'asa! Napetraka tamin'ny ady lehibe faharoa, izy io dia milaza ny tantaran'ny Jiosy italiana lehilahy iray antsoina hoe Guido Orefice. Mihaona sy mianjera-pitia amin'ny tsara tarehy Dora ary izy ireo dia manana zanaka, Giosue, miara -.
Ny tantara dia mikasika ny Guidos fianakaviana sy ny fomba atao ny fiainany Niova be izy ireo rehefa nentina tany amin'ny toby fitanana. Raha misy, mba fialofana ny zanany avy ny horohoro ny manodidina,, Guido weaves pitsiny tantara. Ny fotoana tao amin'ny toby fotsiny ny lalao. Naka sary nanerana maro karazana ivon'ny ny fiandohan 'ny horonan-tsary, na izany aza, dia maha-te ho tia Tuscan tanànan'i Arezzo.
Tapakila Bologna mankany Arezzo
Ianao na miomana mba télécharger ny anankiray amin'ireny sarimihetsika mba hijery na mieritreritra ny diany noho izany efa, tsy ianao? Nahoana no tsy manao na! doha amin'ny eo Save A Train sy ny Bokin'i tapakila amin'ny minitra iray amin'ireo 5 Famous Film Places in Eoropa!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Famous Film Places In Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-film-spots-europe%2F – (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
europetravel filmplaces sarimihetsika filmspots trainjourney Tranride